We Fight We Win. -- " More than Media ": ဘာကြောင့်လဲ
ဘာကြောင့် မင်းကိုင်နိင်၊ကိုကိုကြီး နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်များ နိင်ငံကူးလက်မှတ် မရကြပါသလဲ။
ဘယ်သူက တားဆီးထားပါသလဲ။ ဘာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗမာနဲ့မြန်မာအသေးအဖွဲ တွေကို လိုက်ထောက်နေပါသလဲ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အဖွဲ့ မှာ ခေါင်းမာသူတွေမရှိတော့တာတောင် ဘာကြောင့် ပေါ်လစီတွေမပြောင်းလဲဖြစ်နေပါသလဲ။
မသာ ခွေးကုလားမိုးသီးဇွန်. မြန်မာပြည်ဟာ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေတစ်ခုတည်းပိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးကွ.ဗမာပြည် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက အခြားတိုင်းရင်းသားတွေကို စော်ကားရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ အသေးအဖွဲး မဟုတ်ဘူး မလေးမှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေမြောက်ပေးပြီး တိုင်ပြည်ကို ဖျက်ဆီအောင်းလုပ်တဲ့ချီးထုပ် မိုးသီးဇွန်.မင်းကိုတော်တော်ရွံတယ်
That is called human nature but if we want to go beyond human nature and obtain first world standard in Burma(Myanmar) we all Burmese people have to change mindset.
Be more gentle and must have big heart.
Simple issue to be able to solve by it own.
Big issue need to be solved by great way of approach.
If government body are not qualified to achieve international standard then they should go for training at oversea well known university or institute, nothing to be proud of as we were under golden umbrella .
Be realistic of ourself as who we are now.
မြန်မာလား ဗမာလားဆိုတာ တိတိကျကျ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ တကယ်တတ်မြောက်တဲ့ သမိုင်းပညာရှင်တွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှပဲ သင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့ အဖြေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်...ဒေါက်တာသန်းထွန်းက မြန်မာဆိုတာ သမိုင်းအထောက်အထားအရ လူမျိုးစုတခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်. ဥပမာ မြန်မာစု..မြန်မာရွာ...ဒီကနေမှ မြန်မာပြည်...စသည်ဖြင့်ပေါ့ ..